Shuruudaha isticmaalka - BancaNEO
Ku soo dhawow www.bancaneo.org ("Site" ama "Website"). Mareegtan waxaa iska leh oo ay maamusho MY NEO GROUP TRUST oo ka socda Talyaaniga.
Dhamaan Bogga, ereyada "anaga", "annaga", "madal", "Bancaneo"iyo"anaga" waxay tixraacaan KOOXDA NEO NEO. Waxaan bixinaa mareegtan, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, agabka, iyo adeegyada laga heli karo boggan adiga, isticmaalaha, iyadoo shuruud looga dhigayo oggolaanshahaaga dhammaan shuruudaha, shuruudaha, siyaasadaha, iyo ogeysiisyada halkan lagu sheegay.
Adoo booqanaya bartayada iyo / ama markaad xisaab furan naga furanayso, adiga ("Isticmaalaha" ama "Macaamiil") waxaad ku hawlan tahay "Adeeggeena" waxaadna oggolaatay in lagu xidho shuruudaha soo socda iyo shuruudaha / shuruudaha adeegsiga ("Shuruudaha") , oo ay ku jiraan kuwa shuruudaha iyo shuruudaha dheeriga ah iyo siyaasadaha lagu xusay halkan iyo / ama ay heli karaan hyperlink.
Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxay khuseeyaan dhammaan isticmaaleyaasha bogga, oo ay ku jiraan kuwa aan xadidnayn kuwa isticmaala daalacayaasha, adeegsadayaasha, macaamiisha iyo / ama wax ku biirinta waxyaabaha.
FADLAN AKHRISO SHARCIYADA SOO SOCDA IYO DACWADA ISTICMAALAYA KAhor INTA AAD ADEEGSAN ADEEGYADA. HADII AADAN KU HELI KARIN SHARCIYADAAN, SIYAASADEENNA QARSOODIGA, AMA QOF KASTA OO SIYAASADEENNA AH, MA ADEEGSAN ADEEGYADA.
Bancaneo - Warbixin guud
Ku saabsan. Bancaneo -ONE APP, DHAMMAAN WAXYAABAHA LACAGTA - Koonto ka fur daqiiqad gudahood taleefankaaga, oo lacagtaada sii wad. Dhireynta intaad wax iibsaneyso Waxaan la shaqeyneynaa hogaamiyeyaasha shuraakada ku ah dhiraynta adduunka oo dhan .. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan sameyno, fadlan tixraac boggayaga internetka.
Adeegyada Waxaan bixinnaa adeegyada soo socda:
xisaab shaqsiyadeed iyo ganacsi;
xawaaladaha soo galaya iyo kuwa baxaya ee lacago kala duwan, oo ay ku jiraan lacagaha SEPA iyo SWIFT;
Adeegyada eWallet, oo ay ku jiraan rarka eWallets iyada oo loo marayo dhinacyada dibadda;
lacag bixinta kaarka;
lacag caddaan ah oo lagala baxo ATM.
Kalsoonida qofka. Waxaan xaq u leenahay inaan ku darno / joojino wax soo saar ama adeeg kasta waqti kasta oo aan ku kalsoonaan karno.
Bancaneo waxay si adag ugu xaddidan tahay dhinacyada si sharci ah ku geli kara heshiisyo ka samayn kara internetka. Haddii aad ka yar tahay 18 sano, waxaad u isticmaali kartaa oo keliya Adeegyada oggolaanshaha waalidkaaga ama mas'uulkaaga sharciga ah. Fadlan hubso in waalidkaaga ama mas'uulkaaga sharci ay dib u eegeen oo ay kaala hadleen Shuruudahaan.
Waxaad ogolaatay inaad u isticmaasho Goobta iyo Adeegyada kaliya ujeedooyin ay oggol yihiin Shuruudaha Isticmaalka iyo u hoggaansamida dhammaan sharciyada khuseeya, qawaaniinta, iyo dhaqamada guud ee la aqbalay ama tilmaamaha ku jira awoodaha la xiriira. Waxaad u isticmaali kartaa oo keliya Bogga iyo Adeegyada aan ganacsiga ahayn, gaar u ahayn, aan laguu xallin karin, aan la wareejin karin, iyo adeegsi shaqsiyeed oo xaddidan, oo aan ujeeddo kale lahayn.
Ma yeeli doontid (mana isku deyi doontid):
Ku hel mid kasta oo ka mid ah Adeegyada si kasta oo aan ahayn iyada oo loo marayo is-dhexgalka ay bixiso Bancaneo;
U hel marin aan loo idman BancaneoNidaamka kumbuyuutarka ama ku lug leh waxqabad kasta oo faragelinaya waxqabadka, ama waxyeeleynaya waxqabadka ama amniga Bogga, Adeegyada, Bancaneoshabakadaha, iyo nidaamyada kombiyuutarka;
Ka gal mid ka mid ah Bogga ama Adeegyada iyada oo loo marayo qaab kasta oo otomaatig ah ama astaamo ama aalado otomaatig ah (oo ay ku jiraan isticmaalka qoraallo ama guurguurayaal webka);
Soo gal ama soo aruuriso macluumaad kasta oo lagu aqoonsan karo, oo ay ku jiraan magacyo kasta, cinwaanno emayl ama macluumaad kale oo noocaas ah ujeeddo kasta, oo ay ku jiraan, aan xad lahayn, ujeeddooyin ganacsi;
Soo-saar, nuqul, nuqul, iibin, ganacsi, ama dib u iibi wax kasta oo ka mid ah bogga ama Adeegyada ujeeddo kasta ha noqotee; iyo
Soo-saar, nuqul, nuqul, iibin, ganacsi ama iibin alaabo ama adeeg kasta oo wata astaan ​​ganacsi, summad adeeg, magac ganacsi, astaan ​​ama astaan ​​adeeg oo ay leeyihiin Bancaneo hab loo badinayo ama loola jeedo in lagu jahwareeriyo milkiilaha ama isticmaalaha idman ee calaamadaha, magacyada ama astaamaha.
Liisanka Xaddidan iyo Helitaanka Goobta; Isticmaal La Aqbali Karo
Waa inaadan: (a) dib u iibin ama aadan u isticmaalin wax ganacsi ah oo boggan ama mid ka mid ah waxyaabaha ku jira boggan; (b) wax ka beddel, la qabsi, tarjumid, injineer dib u soo noqnoqda, kala-daadinta, kala-goynta ama beddelaadda mid ka mid ah waxyaabaha ku jira Boggan oo aan loogu talagalin in sidaas loo akhriyo; (c) nuqul, kudayasho, muraayad, soo saarid, faafin, daabacaan, soo dejiso, soo bandhigto, qabato, dhajiso ama gudbiso mid ka mid ah waxyaabaha ku jira Boggan qaab kasta ama qaab kasta; ama (d) isticmaal wixii xog qodis ah, bots, caaro, qalab otomaatig ah ama xog ururin la mid ah iyo qaabab soo saarid ah oo ku saabsan waxyaabaha ku jira bogga ama aad ka soo ururiso wixii macluumaad ah bogga ama isticmaale kasta oo ka tirsan Bogga.
Waxaad ku isticmaaleysaa Boggan qatar adiga ah. Waxaad ku raacsan tahay inaad adigu shakhsi ahaan masuul ka noqon doonto isticmaalka boggan iyo dhammaan isgaarsiintaada iyo waxqabadkaaga boggan. Haddii aan go'aansanno, go'aankeenna keliya, inaad ku howlan tahay howlo mamnuuc ah, oo aanad ixtiraameynin isticmaaleyaasha kale, ama haddii kale aad jebisay Shuruudaha iyo Shuruudaha, waxaan kuu diidi karnaa inaad ku soo gasho Boggan si ku meel gaar ah ama joogto ah iyo go'aan kasta oo la sameeyo sidaas oo kale ayaa ugu dambeysa.
Xisaabaadka, Diiwaangelinta, iyo Furaha sirta ah
Haddii aad isticmaasho Boggan oo adeegsigan oo kale wuxuu u baahan yahay sameysashada koonto iyo / ama lambarka sirta, waxaad adigu keliya masuul ka tahay ilaalinta asturnaanta koontadaada iyo lambarkaaga sirta ah iyo xaddididda gelitaanka kombuyuutarkaaga. Haddii aad furato koonto, diiwaangeliso, ama haddii kale aad na siiso wax macluumaad ah, waad oggolaatay inaad na siiso macluumaad hadda jira, dhammaystiran, oo sax ah sida lagu codsaday foom kasta. Bancaneo mas'uul kama aha wixii qalad ah ama dib u dhac ah ee ka jawaab celinta wixii weydiin ama codsi ah ee ay keenaan macluumaad duugoobay ama khaldan oo aad bixiso ama wixii cillad farsamo ah ee ka baxsan xakamaynta Bancaneo. Waad qiraysaa oo aad oggoshahay in gelitaan kasta, aqoonsi, ama erey sir ah oo la soo saaray oo la xidhiidha boggan (mid walbana "Password") uu yahay macluumaad qarsoodi ah oo ay tahay in ammaan lagu ilaaliyo. Ma shaacin kartid Password-ka noocaas ah qof kale ama hay'ad ama uma oggolaan kartid hay'ad kale inay gasho bogga adoo adeegsanaya furahaas oo kale. Waa inaad ogeysiisaa Bancaneo isla markaaba jabinta amniga ama isticmaalka aan loo idman ee koontadaada. Bancaneo mas'uul kama noqon karto oo wuu iska fogeynayaa dhammaan mas'uuliyadda la xiriirta, adeegsiga wixii macluumaad ah ee aad soo dhigto ama aad ku soo bandhigto Boggan.
Marka lagu daro xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee kor lagu soo sheegay, "Waxyaabaha" waxaa lagu qeexaa sawirro kasta, sawirro, oo ay ku jiraan dhammaan xuquuqda sawirrada, codadka, muusikada, fiidiyaha, maqalka, ama qoraalka bogga.
Bancaneo waajib kuma aha la socoshada Boggan ama qayb ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan xaq u leenahay inaan dib u eegno wax kasta oo la soo dhejiyay oo aan ka saarno, tirtirno, wax ka beddelno ama haddii kale wax ka beddelno waxyaabahaas oo kale, annaga oo ku kalsoon go'aankeena, waqti kasta iyo waqti ka waqti, ogeysiis la'aan ama waajibaad dheeraad ah oo aan kaa saarno. Bancaneo waajib kuma aha inay muujiso ama dhajiso wixii nuxur ah. Bancaneo, iyadoo la raacayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay xaq u leedahay inay shaaca ka qaaddo, waqti kasta iyo waqti ka waqti, wixii macluumaad ah ama ay ku dhajiso waxyaabaha ay u aragto inay lagama maarmaanka u tahay ama ku habboon tahay, oo ay ku jiraan xaddidnaan lagu qanco wixii khuseeya, sharciga, qawaaniinta, waajibaadka qandaraaska, sharciga , nidaamka muranka, ama codsi dowladeed.
TII UGU DAMBEEYSAY EE LAGU AQBLI KARO SHARCIGA KU HABOON, BANCANEO QAADASHO SI AAD UGU SOO SAARAYSID DHAMMAAN DAMMAANADAHA IYO WAKIILADDABA, MUUJIN AMA LA SHAQEEYAY, OO AY KA MID Yihiin (A) DARYEELYADA LOOGU TALAGALAY AMA UJEEDDADA UJEEDADA GAARKA AH AMA ISTICMAALKA GOOBTA IYO DUKAANKA, INTA KU DARSAN, AMA NATIIJOOYINKA AY KU HELEEN ISTICMAALKOODA AMA KU SAABSAN WAXQABADKA DUWAN, (B) DARYEELAHA AMA SHARCIYADA KU SAABSAN MUDDADA LOOGU TALAGALAY, IYO (C) DAMMAANADAHA AMA SHARCIYADA AAN LA ISKU DIIDIN AMA Qalad BILAASH AH AMA ISTICMAAL. BOGGA IYO DHAMMAAN WAXYAABAHA KA JIRA MAGAALADA IYO WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY SII QEYBTA AYAAN KU SOO BANDHIGAYAA SIDA AY SII YIHIIN 'ISTICMAALKAAGA GOOBTU WAA HALISTAADA.
Waxaad ku raacsan tahay in dhacdo kasta oo ay tahay Bancaneo inay kugula xisaabtamaan adiga, ama cid kasta oo saddexaad ah, wixii macaash ah oo lumay, waxyeellooyin, ciqaab, ciqaab, khaas ah, ama waxyeelo aan toos ahayn oo ka dhasha ama la xiriirta Bogga ama Shuruudaha iyo Xaaladaha, xitaa haddii lagula taliyo suurtagalnimada waxyeelada, iyadoon loo eegin haddii dalabka waxyeelada noocaas ah uu ku saleysan yahay heshiis, jirdil, mas'uuliyad adag ama mid kale. Xaddidan mas'uuliyadda waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, wixii (i) khaladaad ah, khaladaad, ama khaladaad ah oo ku jira Mawduuc kasta ama lumis ama dhaawac nooc kasta ah oo aad ku timaaddo isticmaalkaaga ama ku tiirsanaanta Mawduuca; . (iii) marin aan la fasaxin ama isticmaalka Bogga ama Bancaneo'adeegeyaal sugan iyo / ama wixii macluumaad shakhsi ah iyo / ama macluumaad maaliyadeed oo ku kaydsan; ama (iv) xatooyo, khaladaadka hawlwadeenka, shaqo joojinta ama dhibaatooyinka kale ee shaqada ama xoog kasta oo xoog leh.
Waad ogolaatay inaad magdhow siiso oo aad hayso Bancaneo iyo hoosaadyadeeda, shirkadaha raacsan, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiilada, iyo shaqaalaha, aan dhib lahayn kana soo horjeedaan dacwad kasta, ficil, sheegasho, dalab, ciqaab ama khasaaro, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka ee macquulka ah, oo ay sameeyeen ama ka dhasheen cid kasta oo saddexaad sababo la xiriira ama soo baxa isticmaalkaaga Goobta, jebinta Shuruudaha iyo Shuruudaha ama waxyaabaha ay ku dareyso tixraac ahaan, ama ku xadgudubka sharci kasta, sharciyeyn, amar ama amarro kale oo sharci ah, ama xuquuqda dhinac saddexaad.
Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxaa lagu xukumi doonaa oo loo qaabeyn doonaa si waafaqsan sharciyada Estonia waxaadna halkan ku gudbineysaa awooda gaarka ah ee maxkamadaha Estonia.
Haddii aad isticmaaleyso ama aad ku howlan tahay websaydhka oo aad ka yar tahay 18 sano, waa inaad haysataa oggolaanshaha waalidkaa ama ilaaliyahaaga sharciga ah inuu sidaas sameeyo. Adoo adeegsanaya ama la falgalaya websaydhka, waxaad sidoo kale qireysaa oo aad oggoshahay in laguu oggol yahay adiga sharcigaaga ku habboon ee adeegsiga iyo / ama la falgalka websaydhka.
Asturnaanta & Kukiyada
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida aan u ururino macluumaadkaaga iyo cookies, fadlan tixraac Nidaamkeena Asturnaanta iyo Nidaamka Kukiyada.
Waxaan xaq u leenahay inaan cusbooneysiino oo aan dib u eegis ku sameyno Shuruudahaan iyo Shuruudahaas waqti kasta. Waad ogaan doontaa haddii Shuruudahaan iyo Shuruudahaan dib loo eegay tan iyo booqashadii ugu dambeysay ee websaydhka adiga oo tixraacaya "Taariikhda Dhaqan galka ah ee Siyaasadda Hadda" ee ku taal dusha boggan. Isticmaalka Degelkeennu wuxuu ka dhigan yahay aqbalaadda Shuruudaha iyo Shuruudahaan sida aan wax uga beddelnay ama dib u eegay annaga waqti ka waqti, waana inaad, sidaa darteed, dib u eegis ku sameysaa Shuruudahaan iyo Shuruudahaan si joogto ah.
Xiriirrada elektarooniga ah
Markaad booqato Bogga ama aad noo soo dirto emayl, waxaad si elektaroonig ah noogula xiriiraysaa. Markaad sidaas samaynayso, waxaad ogolaatay inaad ka hesho isgaarsiin elektaroonig ahaan ah. Waxaad ogolaatay in dhamaan heshiisyada, ogeysiisyada, shaacinta, iyo isgaarsiinta kale ee aan ku siino adiga si elektaroonig ah ay u qanciso shuruud kasta oo sharci ah oo wada xiriirka noocaas ah uu yahay mid qoraal ah
Haddii mid ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudahaas loo arko mid aan ansax ahayn, aan waxba ka jirin, ama sabab kasta oo aan la dhaqan gelin karin, muddadaas waxaa loo arki doonaa mid la jaray oo ma saameyn doonto ansaxnimada iyo dhaqan gelinta wixii haray ama shuruudo ah.
Waxaa naloo oggolaan doonaa inaan ku meeleyno, wareejinno, ama aan qandaraas hoos u dhigno xuquuqdeena iyo waajibaadkayada iyadoo la raacayo shuruudahan iyadoon lagaa helin ogolaansho ama ogeysiis lagaa helin. Ma laguu oggolaan doono inaad ku wareejiso, ku wareejiso, ama aad qandaraas ka bixiso mid ka mid ah xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga heshiiskan.
Bancaneo mas'uul kama aha dib u dhac kasta oo ay sababaan duruufo ka baxsan BancaneoXakamaynta, tusaale muranka guud ee shaqada, cimilada xad dhaafka ah, falalka dagaalka, dabka, hillaaca, weerarada argagaxisada, amarada dawlada oo la badalay, cilado farsamo, cilado xaga isgaarsiinta korontada / telefishanka ama cilado kale ama dib u dhac ku yimaada adeega. by alaab-qeybiyeyaal duruufaha kor ku xusan awgood
Heshiiska oo dhan
Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxay soo bandhigayaan dhamaan fahamka iyo heshiiska adiga iyo Bancaneoku saabsan mawduuca halkan ku yaal oo ka sarreeyaa dhammaan isgaarsiinta hore iyo kuwa aan caadiga ahayn iyo soo-jeedinta, ha ahaato mid elektaroonig ah, hadal ama qoraal ah oo ku saabsan Bogga. Nooc daabacan oo ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudahaan iyo ogeysiis kasta oo lagu bixiyo qaab elektiroonig ah waa in lagu aqbalsan yahay dacwadaha garsoorka ama maamulka ee ku saleysan ama la xiriira Shuruudahaan iyo Shuruudahaas isla heer isla markaana ku xiran shuruudo la mid ah dukumiintiyada kale ee ganacsiga iyo diiwaannada markii hore la soo saaray loona habeeyay qaab daabacan. Xuquuq kasta oo aan si cad loogu bixin halkan waa la keydiyay. Ma qori kartid Shuruudaha iyo Xaaladaha, ama ku wareeji, wareejin ama ku dalban xuquuqdaada dhexdeeda. Ka gaabinta wax ka qabashada jebinta adiga ama dadka kale kama tanaasuli doonto BancaneoXaqa ay u leedahay inay wax ka qabato jabinta ku xigta ama la mid ah.
Muddada iyo Joojinta
Heshiiskani wuxuu dhaqan galayaa taariikhda aad marka hore gasho Bogga oo wuu sii soconayaa illaa laga joojiyo si waafaqsan shuruudaha. Ku xad gudubka heshiiskan wuxuu sababi karaa in si deg deg ah loo joojiyo heshiiskan iyo diidmada ama joojinta marinkaaga Bogga. Xayiraadaha noocan ah waxay noqon karaan kuwo ku meel gaar ah ama joogto ah. Marka lagaa joojiyo, xaqqa aad u leedahay inaad adeegsato Boggan waa lagaa qaadi doonaa. Dhammaan afeefyada, xaddidnaanta mas'uuliyadda, magdhawga, iyo xuquuqda lahaanshaha iyo rukhsadaha Bancaneo ka badbaadi doonaa joojinta kasta.